Ijaarsi Hospitaala sabbataa adda cite ture eegale – Fana Broadcasting Corporate
Ijaarsi Hospitaala sabbataa adda cite ture eegale
Finfinnee, Fulbaana 29, 2012 (FBC) – Ijaarsi Hospitaala sabbataa adda cite ture eegaleera.
Hoospitaalichi ijaarsi isaa bara 2003 birri miiliyoona 95.5 hirmaanna ummataa fi bulchiinsa magaalaa Sabbaataatiin eegalamuun isaa ni yaaddatama.
Haata’uti ijaarsi hoospitaalicha otuu hin xumuramiin waggoota hedduu lakkofsiiseera.
Xumuramuu dhabuun ijaarsa hospitaalichaa komii ummataa guddaa uumeera.
Komii hawaasni kaasaa jiruuf furmaata laachuuf Mootummaa naannoo Oromiyaa fi Biiroon Fayyaa oromiyaa bara 2012 birrii 448,247,912.47 hoospitaalichi bifa haaraan ijaarsi akka eegalu ta’eera.
Hospitaalli Sabbataa yeroo walharkaa fuudhinsi taasifamutti ijaarsi isaa %63.75 irra kan jiru yoo ta’u, maallaqa waliigateen taasifame keessaa %57.3 baasii ta’ee jira.
Hogganaa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaaa Dooktar Darajjee Dhugumaa sirnicha irratti argamuun haasaa taasisaniin , ummanni magaalaa Sabbataa rakkoo hospitaalaa qaban hirmaannaa isaanitiin haalli itti furachuuf soch’aa turan hojii fakkeenyummaa guddaa qabudhajedhan.
Haata’uti, sababa garaagaraatiin yeroo barbaadametti xumuramee tajaajila kennuu hin dandeenye.
Mootummaan naannoo keenyaa rakkoo hawaasaa kana hubachuun baajata ijaarsa kana xumuursisu danda’u fi gamoo dabalataa abbaa darbii sadii ijaarsisu ramaduun guyyaa har’aa ijaarsi jalqabsiisee jira jedhaniiru.
Hospitaalli kun guyyoota 740 booda hojiin ijaarsa isaa xumuramee tajaajila ni kenna jedhameeti eeggama.
Guyyaan HIV/AIDS sadarkaa naannoo Oromiyaatti Jimmaatti kabajame
Baankiin Addunyaa Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Ityoophiyaaf deeggarsa taasise
Ityoophiyaatti Qorannoon tajaajila Sanyii eegalamuufi
Dhugaatii alkoolii baay’isuun dhibee Kaanseeriif nama saaxila – Qorannoo